धेरै सोधिने प्रश्नहरु | サポート | Choysan
Communication & Life Platform
TOP About Service Character
Choy-san アプリ概要（本人確認前（BANKIT Me）/
本人確認後（BANKIT You）） |
Choy-San कार्डको बारेमा पहिचान प्रमाणीकरण खाता र लगईन चार्ज प्रक्रिया वित्तीय रेमिट्यान्स रकम निकासी अन्य
Choy-Sanमा म्याद सकिने मिति छ?
"Choy-Sanको म्याद सकिने मिति5बर्ष हो। BANKIT Me (Choy-San) सम्झौताको लागि म्याद सकिने मितिको नवीकरण छैन, त्यसैले कृपया Choy-San ब्यालेन्स नछोड्नुहोस्। कृपया Choy-San App Visa card जानकारी प्रदर्शनमा समाप्ति मिति जाँच गर्नुहोस्। ※ यदि "04/20" भनेमा, तपाई अप्रिल २०२० सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।"
आधिकारिक Choy-San वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् "
कृपया मलाई PUSH 通知・メール配信 कसरी रद्द गर्ने भन्नुहोस्।
कृपया Choy-Sanएप्लिकेसनबाट Home → My Page → ​​information settingबाट रद्द गर्नुहोस्।
Choy-San एप्लिकेसन सुरु हुँदैन।
यदि एप्लिकेसन सुरु भएन भने, निम्न कारणहरू सम्भव छन्।
तपाईं ट्याब्लेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
पर्याप्त मेमोरी छैन।
यदि OS लाई निर्दिष्ट गरिएको छैन भने।
[Choy-San] त्यहाँ उपयोग सीमा छ?
उपयोग सीमाका लागि निम्न चेक गर्नुहोस्।
▼ BANKIT Me (Choy-San) उत्पादन अवलोकन
▼ BANKIT You (Choy-San) उत्पादन अवलोकन
[Choy-San] के त्यहाँ शुल्क लाग्छ ?
तलका सेवाहरूको प्रयोगमा निर्धारित शुल्क लाग्नेछ।
・Seven Bank ATM निकासी (एक महीना एक पटक नि: शुल्क): ११० येन (कर समावेश)
Choy-Sanशेष रकम फिर्ता: 550 येन (कर समावेश)
・वास्तविक कार्ड जारी गर्ने: 550 येन (कर समावेश)
उपयोग Statement जारी गर्ने: २२० येन (कर समावेश )
・पिन कोड सूचना: २२० येन (कर समावेश)
विदेशी आपतकालिन पुनः जारी: 15,000 येन (कर समावेश)
※सेवा प्रयोग गर्नको लागि तपाईको परिचय पहिल्यै निश्चित गर्नु आवश्यक छ। एक उत्पादन अबलोकन को लागी निम्न जाँच गर्नुहोस्।
＞आधिकारिक Choy-San वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
[Choy-San] त्यहाँ कुनै प्रवेश शुल्क वा वार्षिक शुल्क छ?
हामीकहा कुनै सदस्यता वा वार्षिक शुल्कहरू छैनन्।
[Choy-San] के जुन कुनै ब्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्?
13 बर्ष भन्दा माथिको र जापानमा बस्ने जो कोहीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्।
येद्दपी यो निम्नलिखित केसहरूमा प्रयोग गर्न सकिदैन।
यदि तपाईं प्रयोगका सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्न
टर्मिनलहरू प्रयोग गर्नेहरू निर्दिष्ट गरिएको छैन
OS प्रयोग गर्नेहरू निर्दिष्ट गरिएको छैन
नाबालिगहरू अविभावकीय स्वीकृति बिना
Choy-San कस्तो प्रकारको एप्लिकेसन हो?
Choy-San एक वालेट सेवा हो जुन एप्लिकेसन इन्स्टल पछि तुरून्त तपाईलाई जम्मा गर्न र खरीद गर्न पाउनु हुनेछ ।
हामी कहाँ कुनै सदस्यता शुल्क वा वार्षिक शुल्क छैन।
■ जब तपाइँ एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई तपाइँको पहिचान प्रमाणित आवश्यक बिना "वरचुअल कार्ड (इन्टरनेटको लागि भिसा प्रिपेड कार्ड) मात्र जारी गरिनेछ।
■ तपाईले अग्रिममा प्रयोग गर्न चाहानु भएको रकम लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई Choy-San ब्यालेन्सको दायरा भित्र भिसा सदस्य स्टोरहरूमा किनमेल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न चार्ज गर्ने विधिहरू जस्तै सेभेन बैंक एटीएम चार्ज र क्रेडिट कार्ड चार्ज उपलब्ध छन्।
यदि तपाईं चार्ज, शपिंग, वा पैसा पठाउनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं तुरून्त एप्लिकेसनमा उपयोग विवरणहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ।
■ तपाईले वालेट सेवा चौबिसै घण्टा एप्लिकेसनबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र बन्द गर्न सक्नुहुनेछ , ताकि तपाई यसलाई सुरक्षित र सुरक्षित प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
■ तपाइँ Choy-San मा साथीहरू बीच पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ।
[Choy-San] पहिचान प्रमाणीकरण अझै समाप्त भएको छैन।
यो तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्न 3-5 व्यवसाय दिन लाग्छ।
[Choy-San] पहिचान प्रमाणिकरणको परिणाम अपूर्ण छ।
यदि पहिचान प्रमाणिकरणको परिणाम अपूर्ण छ भने, कृपया निम्न जाँच गर्नुहोस्।
इनपुट सामग्रीको पुष्टिकरण
कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको ग्राहक
जानकारी परिचय प्रमाणिकरण कागजातको जानकारीसँग मेल खान्छ
कृपया अपलोड छवि पुष्टि गर्नुहोस्
कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले अपलोड गरेको पहिचान
प्रमाणीकरण कागजातको छवि अस्पष्ट छैन कि त्यहाँ छविमा त्रुटि छैन,वा त्यहाँ पर्याप्त छवि पोइन्टहरू छैनन्।
* तपाईंले कम्तिमा दुई पहिचान कागजातहरू सबमिट गर्नुपर्नेछ।
* जाईर्यु कार्ड : यदि तपाईंले आफ्नो परिवारको नाम परिवर्तन गर्नुभयो
वा तपाईंको ठेगाना परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंलाई पछाडि साइड पनि चाहिन्छ।
बिभिन्न स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू: यदि कार्ड प्रकारको पछाडिको ठेगाना बक्स छ भने, पछाडिको पक्ष पनि आवश्यक छ।
* परिचय प्रमाणिकरण कागजातहरूको संयोजनको विवरणहरूका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
[Choy-San] म पहिचान प्रमाणिकरण कागजातहरू अपलोड गर्न सक्दिन।
यदि तपाईं आफ्नो पहिचान प्रमाणिकरण कागजातहरू अपलोड गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, निम्न सम्भावनाहरू सम्भव छन्।
Uploaded अपलोड गरिएको छवि आकार 5Mbभन्दा बढी छ
कृपया स्मार्टफोन क्यामेरा सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
परिचय प्रमाणीकरण सेवा मर्मत भइरहेको छ
कृपया पछि पुन: प्रयास गर्नुहोस्।
[Choy-San] 3D सुरक्षित के हो?
3D सुरक्षित भनेको कार्ड जारी गर्ने कम्पनीसँग दर्ता गरिएको पासवर्ड हो इनपुट गरेर, तपाईं आफै प्रमाणिकरण गर्न सक्नुहुनेछ रअन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू जस्तै भिसा र मास्टरकार्ड जसले स्पूफिंग रोक्दछ सिफारिश गरिएको व्यक्तिगत प्रमाणीकरण सेवा हो ।
Choy-San मा, हामी APLUS द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड स्वीकार गर्दछौं चार्जको लागि दर्ता गर्दा हामीले व्यक्तिगत पहिचान 3D सुरक्षित गरेका छौं।
[Choy-San] कृपया मलाई परिचय प्रमाणिकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू बताउनुहोस्।
कम्तिमा दुई पहिचान कागजातहरू पेश गर्न आवश्यक छ। उदाहरणको लागी: निवास कार्ड(जाईर्यु कार्ड) + विभिन्न स्वास्थ्य बीमा कार्ड
* जाईर्यु कार्ड : यदि तपाईंले आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गर्नुभयो भने,अथवा पछाडी कुनै विवरण छ भने　पछाडि साइड पनि चाहिन्छ।
बिभिन्न स्वास्थ्य बीमा कार्डहरू: यदि कार्ड प्रकारको पछाडिको ठेगाना बक्स छ भने, ठेगाना भरेर पछाडीको पनि पेस गर्नु पर्ने हुन्छ
[Choy-San] परिचय प्रमाणीकरण भनेको के हो?
यो व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट गर्न र पहिचान कागजात पठाउन प्रक्रिया हो। पहिचान प्रमाणिकरण पूरा भए पछि सुविधाजनक सेवाहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। Choy-San एप्लिकेसन My Pageबाट → ​​कृपया तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्नुहोस्।
* यो तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्न ३ देखि ५ व्यवसाय दिन लाग्छ।
[Choy-San] तपाईको घर ठेगाना वा फोन नम्बर परिवर्तन गर्नका लागिकृपया मलाई यसको बारेमा भन्नुहोस्।
My page → Account Setting → व्यक्तिगत जानकारी परिवर्तन तपाईं अधिक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
[Choy-San] मैले गलत पासवर्ड प्रविष्ट गरें र लगइन गर्न सकिन।
यदि तपाईं गलत संख्या प्रविष्ट गर्नुभयो निश्चित संख्या
भन्दा धेरै पटक,Choy-San अनुप्रयोग निलम्बित हुनेछ।कृपया लगइन गर्नुहोस् एसएमएस प्रमाणीकरण गर्नुहोस् र पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्।
[Choy-San] प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना) पहिले प्रयोग गरिएको थियो के म प्रयोग गर्न सक्छु?
User ID (email address) एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईं उही प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना) को साथ पहिले जस्तै दर्ता गर्न सक्नुहुन्न।
[Choy-San] अक्षर र नम्बर हरु केके हुन् जुन पासवर्डहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
तपाइले password को लागी ठुलो अक्षर, सानो अक्षर र अंक सहित को ७ वटा भन्दा बडीको अक्षरहरुबाट बनाउन सक्नुहुन्छ ।
* यदि तपाईंले गलत पासवर्ड एक निश्चित संख्या भन्दा धेरै पटक प्रविष्ट गर्नुभयो भने, यो लक हुनेछ।
* कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईंले विगत चार पटक सेट गर्नुभयो।
[Choy-San] "निर्दिष्ट ईमेल ठेगाना पहिले नै छ"पंजीकृत" प्रदर्शित छ र म अगाडि बढ्न सक्दिन।
यदि तपाईं इनपुट स्क्रिनमा तपाईंको आफ्नै ईमेल ठेगाना दर्ता गर्न सक्नुहुन्न भने,कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
[Choy-San] म मेरो उपनाम दर्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छु।
"Choy-San को Home Screen→My page account setting बाट परिवर्तन गर्नुहोस्।"
[Choy-San] मेरो पिन लक भएको छ ।
"यदि तपाईंले निश्चित रूप भन्दा धेरै पटक आफ्नो पिन प्रविष्ट गर्नुभयो भने, यो लक हुनेछ र तपाईं Choy-San अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस् र पिन रिसेट प्रक्रिया गर्नुहोस्।"
* यदि तपाईं आफ्नो वास्तविक कार्ड पुनः जारी गर्न चाहनुहुन्छ भने सेक्युरिटी कोड रिसेट गर्नको लागि यसले समय लिनेछ। "
[Choy-San] पिन नम्बरको बारेमा
सेभेन बैंक ATM बाट रकम निकाल्नको लागि र वास्तविक कार्डबाट सपिङ्ग गर्नको लागि तपाइलाई ४ अंकको पिनकोड　नम्बर चाहिन्छ। व्यक्तिगत पहिचानको लागि पनि यो आबस्येक हुने हुनाले नबिर्सनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।
[Choy-San] के म धेरै Accountहरू बनाउन सक्छु ?
प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई एक खाता प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। धेरै खाताहरू भएमा सम्झौता उल्लङ्घन हुन्छ र प्रयोग प्रतिबन्ध वा खाता मेटाउने पर्ने हुन्छ ।
[Choy-San] म मेरो पिन परिवर्तन गर्न चाहन्छु।
तपाईं शपिंगको लागि प्रयोग गरिने तथा सेभेन बैंक एटीएममा रकम निकासीको लागि आवश्यक पर्ने पिन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँ यसलाई Choy-San एप्लिकेसनको होम → मेरो पेजबाट PIN नम्बर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
* वास्तविक कार्ड जारी गर्ने ग्राहकहरूले कार्ड पुन: जारी गर्नुपर्दछ। कार्ड पुन: जारी गर्नको लागि ५००येन + उपभोग करको शुल्क लाग्नेछ ।
* यदि तपाईंले गलत नम्बर एक निश्चित संख्या भन्दा धेरै प्रविष्ट गर्नुभयो भने, यो लक हुनेछ र परिवर्तन गर्न सकिदैन। कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
[Choy-San] म मेरो ईमेल ठेगानाको लागि प्रमाणिकरण कोड प्राप्त गर्न सक्दिन।
यदि तपाईं आफ्नो ईमेल ठेगानाको लागि प्रमाणिकरण कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया निम्न जाँच गर्नुहोस्।
कृपया तपाईंको ईमेल ठेगाना ठीक छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
नेटवर्कको वातावरण राम्रो नभएको ठाउँमा ढिलाइ हुन सक्छ, त्यसैले कृपया नेटवर्क राम्रो भएको ठाउँबाट फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं स्पाम रोक्न ईमेल प्राप्त गर्न सेट गर्नुभयो, कृपया डोमेन पदनामबाट (@ Choy-San.jp)रद्द गर्नुहोस्।
[Choy-San] म SMS प्रमाणीकरण गर्न सक्दिन।
यदि तपाईं एसएमएस प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया निम्न जाँच गर्नुहोस्।
तपाईंले गलत कोड प्रविष्ट गर्नुभएको पनि हुनसक्छ । कृपया फेरि प्राधिकरण कोड जारी गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
प्रमाणिकरण कोडको म्याद समाप्त हुने समय छ। यदि तपाईं समयमै प्रमाणितगर्नु हुन्न भने, तपाईंले पुनः जारी गर्नुपर्नेछ।
[Choy-San] म SMS प्राप्त गर्न सक्दिन।
यदि तपाईं SMS प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया निम्न कुराहरू जाँच गर्नुहोस्।
Your तपाईंको उपकरणको रेडियो तरंग (संचार) स्थिति
मोबाइल अपरेटरको रेडियो तरंगहरू प्रयोग गरी एसएमएस पठाइन्छ। यदि रेडियो तरंगको वातावरण खराब छ भने, यसलाई प्राप्त गर्न केहि समय लाग्न सक्दछ वा तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्न। कृपया राम्रो वातावरणको ठाउँबाट फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
तपाइले प्रयोग गर्नुभएको टेलिफोन नम्बर
एसएमएस प्राप्त गर्न सक्ने फोन नम्बर Choy-San सम्झौताको लागि आवश्यक छ।
SMS प्राप्त गर्न नसकेको फोन नम्बर बाट खाता निर्माण र अरु सेवाहरु प्रयोग गर्न सकिदैन ।
* यदि मोडेल परिवर्तनका कारण फोन नम्बर परिवर्तन भयो आदि। कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको रिसेप्शन सेटिंग्स, आदि
यदी तपाइले आफ्नो फोनमा रजिस्टर भएको ब्यक्ति बाहेक अरु कुनै नम्बरबाट आउने SMS अस्विकार गर्नु भएको छ भने, तपाइले प्रमाणीकरण कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न ।
■ SMS स्टोर capacity भन्दा धेरै नाघ्यो भने
कृपया अनावश्यक डाटा मेटाउनुहोस् र फेरि प्रमाणीकरण कोड जारी गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
[Choy-San] म Passcode परिवर्तन गर्न चाहान्छु।
तपाईंको Passcode परिवर्तन गर्नका लागि Choy-San एप्लिकेसनको Home screenमा जानुहोस् → My pageबाट Passcode परिवर्तन गर्नुहोस्।
[Choy-San] मैले मेरो Passcode बिर्सेंछु ।
कृपया Choy-San एप्लिकेसन डिलिट गर्नुहोस् र यसलाई पुन: डाउनलोड गर्नुहोस्। त्येस्पछी तपाइले　प्रयोग गरिरहनु भएको फोनबाट तलका कुराहरु गर्नुहोस्।
तपाईंको दर्ता गरिएको प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना) र पासवर्डको साथमा फेरि लगईन गर्नुहोस्। त्यस पछि, माई पेजबाट बायोमेट्रिक्स (finger print, Face ID) मा प्रमाणीकरण विधि स्विच गर्नुहोस् र परिवर्तन पासकोड चयन गर्नुहोस्। तपाईं यो प्रक्रियाबाट पासकोड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ।
Android को लागी
तपाईंको दर्ता गरिएको प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना) र पासवर्डको साथ फेरि लगईन गर्नुहोस्। पासकोड रिसेट स्क्रीनमा स्विच गर्नुहोस् र पासकोड रिसेट गर्नुहोस्।
* कार्ड नम्बर, Choy-San ब्यालेन्स, प्रयोग विवरणहरू, आदि install हुनुभन्दा पहिले पनि राखिनेछ　install पछि पनि राखिनेछ ।
[Choy-San] मैले मेरो पिन नम्बर सेट (परिवर्तन) गर्न सक्दिन।
निम्न अंक नम्बरहरू दर्ता गर्न सकिँदैन। प्रविष्ट गरिएका विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्।
उही संख्याको चार अंक (उदाहरण: ११११)
लगातार आउने अंक नम्बरहरू (उदाहरण: १२३४ , ४३२१ , ८९०१ )
व्यक्तिगत जानकारीको अंश (जस्तै, जन्म मिति, महिना मिति, मोबाइल फोन नम्बरसँग सम्बन्धित　नम्बरहरू)
[Choy-San] बिस्वोस्नीय सेटिंग प्रक्रिया भनेको कस्तो प्रकारको कार्य हो ?
बिस्वोस्नीय सेटिंग एक प्रकार्य हो कि ग्राहकहरुको लागी आफ्नो उपयोग सीमा सेट गर्न को लागी　अनुमति दिन्छ।
"Choy-San एप्लिकेसनको होम → मेरो पेज → ​​बिस्वस्निय सेटिंग्स तपाईं सेट गर्न सक्नुहुन्छ। "
[Choy-San] मोबाइलको मोडलहरू परिवर्तन गर्दा के गर्नु पर्छ ?
यदि तपाइँले मोबाइलको मोडेल परिवर्तन वा मर्मतको कारण फोन परिबर्तन गरिएको छ भने पनि तपाइँले Choy-San प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै नयाँ दर्ता गर्नु आवश्यक छैन।
मोबाइलको मोडल परिबर्तन गर्नु भन्दा पैले को मोबाइलबाट Choy-San एप्लिकेसनमा माई पेजमा गइ आफ्नो विवरणहरु सबै लगआऊट गर्नुहोस ।
नयाँ मोबाइलमा "लग इन गर्नुहोस्"।
* यदि फोन नम्बर परिवर्तन भयो भने कृपया ग्राहक डेस्कबाट छुट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्।
म "[Choy-San] प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना), पासवर्ड, फोन नम्बर परिवर्तन गर्न चाहान्छु "
प्रयोगकर्ता आईडी (ईमेल ठेगाना), पासवर्ड, फोन नम्बर परिवर्तन गर्नुको लागि ।
"Choy-San App home screen → My page → account Setting बाट परिवर्तन गर्नुहोस्।"
[Choy-San] मलाई लग इन कसरी गर्ने बताउनुहोस्।
"लगईन"बटन क्लिक गरी तपाईंको प्रयोगकर्ता आईडी तपाईंको (ईमेल ठेगाना) र पासवर्ड प्रविष्ट गरी लगइन गर्नुहोस ।
[Choy-San] बैंक ट्रान्सफर रकम चार्ज ट्रान्सफर पूरा भइसकेको सूचना प्राप्त गरेको छैन।
" कृपया सहि ईमेल ठेगाना वा रेजिष्टर्ड ईमेल ठेगाना पुष्टि गर्नुहोस्। नेटवर्क वातावरण राम्रो नभएको ठाउँमा ढिलाइ हुन सक्छ, त्यसैले कृपया नेटवर्क वातावरण राम्रो भएको ठाउँमा फेरि प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं स्पाम रोक्न ईमेल प्राप्त गर्न सेट गर्नुभयो, कृपया डोमेन पदनाम (@ Choy-San.jp) हटाउनुहोस्।
＞Choy-San आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
[Choy-San] बैंक ATM बाट चार्ज गर्दा error भयो।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि निम्न केसहरूमा त्रुटि देखा पर्नेछ।
・ यदि कम्पनी कोड फरक छ भने, त्रुटि देखा पर्नेछ।
・ यदि तपाईं तपाईंको Choy-San शेष रकमको माथिल्लो सीमा नाघ्नुभयो भने,
त्रुटि देखा पर्नेछ र पूर्ण फिर्ता हुनेछ ।
・ एक पटक, दिनमा एक पटक, महिनामा एक पटक प्रत्येकको लागि एक लेनदेन सीमा छ।
Choy-San ब्यालेन्समा कुनै ब्याजदर छ?
यो बैंकले स्वीकार गरेको निक्षेप वा बचत होईन, त्यसैले ब्याज दरहरू लागू हुँदैन।
[Choy-San] रिचार्ज गर्न सक्ने संख्याको सीमा छ ?
त्यहाँ रिचार्ज गर्न सक्ने संख्याको सीमा छैन।
[Choy-San] मैले कहिले चार्ज गरिएको रकम प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं यसलाई चार्ज प्रक्रिया पूर्ण गरे पछि तुरून्त प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि Choy-San ब्यालेन्समा रकम देखिदैन भने, Choy-San ब्यालेन्स अपडेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
[Choy-San] यदि मैले चार्ज गरेको रकम प्रयोग गरेन भने के हुन्छ?
"यदि तपाइँ BANKIT Me(Choy-San) सदस्यता लिनुभयो भने म्याद सकिने मिति अद्यावधिक हुनेछैन। Choy-San शेष अबधी म्याद सकिने मिति भए पछि हामी Choy-San शेष रकम फिर्ता गर्दैनौं किनकि यो एक प्रीपेड भुक्तानी विधि हो।कृपया प्रयोग गर्नुहोस् ताकि Choy-San को शेष र आफै0येन हुनेछ।"BANKIT Me(Choy-San) " प्रदर्शन कोष बन्दोबस्त कानूनमा आधारित छ "
[Choy-San] के जापानी येन बाहेकको रकमबाट पनि चार्ज गर्नु मिल्छ ?
केवल जापानी येनबाट मात्र चार्ज गर्न सकिन्छ।
"[Choy-San] यदि त्यहाँ कुनै लेनदेन वा शुल्क छ जुन तपाईं याद गर्नसकिन भने ,मैले के गर्नुपर्छ? "
यस्तो समस्या परेमा कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
[Choy-San] सेभेन बैंक एटीएमबाट रकम निकाल्न सकिदैन।
कृपया जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले उपलब्ध रकम भन्दा बढि रकम प्रविष्ट गर्नुभयो। कृपया फिर्ता रकमको लागि Choy-San एप्लिकेसन होम स्क्रिनमा वालेट मेनू जाँच गर्नुहोस्।
साथै, क्रेडिट कार्ड चार्जको कारणले Choy-San ब्यालेन्स फिर्ता लिन सम्भव छैन यो किनमेलको लागि मात्र प्रयोग हुनेछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईं सेभेन बैंक एटीएमबाट रकम निकासी गर्न सक्नुहुन्न।
[Choy-San] क्रेडिट कार्डबाट चार्ज गर्न सकिएन।
"रजिस्टर गरिएको क्रेडिट कार्डको समयावधि सकिएको छ,यो प्रयोगयोग्य नहुन सक्छ। कृपया कार्डको वैधता जाँच गर्नुहोस्। "
[Choy-San] अधिकतम चार्ज गर्नु मिल्ने रकम कति हो?
अधिकतम चार्ज रकमको लागि कृपया निम्नलिखित जाँच गर्नुहोस्।
▼ BANKIT Me (Choy-San)उत्पादन अवलोकन
▼ BANKIT You(Choy-San) उत्पादन अवलोकन
[Choy-San] म मेरो क्रेडिट कार्ड चार्ज दर्ता गर्न सक्दिन।
हामीकहा केवल APLUS क्रेडिट कार्डबाट मात्र चार्ज गर्ने सेवा उपलब्ध छ।
[Choy-San] क्रेडिट कार्डबाट चार्ज गर्नका लागि म कति क्रेडिट कार्डहरू दर्ता गर्न सक्छु?
केवल एक क्रेडिट कार्ड दर्ता गर्न सकिन्छ।
[Choy-San] कृपया मलाई Choy-San ब्यालेन्समा चार्ज गर्न सकिने रकम बताउनुहो।
[Choy-San] ब्यालेन्समा चार्ज गर्न सकिने रकम निम्न अनुसार छ।
पहिचान प्रमाणिकरण अघि
मुख्य वालेट: १००,००० येन
सब वालेट: १००,००० येन
पहिचान प्रमाणिकरण पछि
सब वालेट: २,०००,००० येन
[Choy-San] के म चार्ज रद्द गर्न सक्छु?
तपाईं चार्ज रद्द गर्न सक्नुहुन्न।
[Choy-San] म क्रेडिट कार्डबाट चार्जगर्न दर्ता गरिएको कार्ड मेटाउन चाहन्छु।
चार्जिंगको लागि प्रयोग गरिएको क्रेडिट कार्ड मेटाउने हो भने ।
Choy-San एप्लिकेसन होम → चार्ज → क्रेडिट कार्ड चार्ज चयन गर्नुहोस्
कृपया "चार्जको लागि क्रेडिट कार्ड मेटाउनुहोस्" बाट हटाउनुहोस्।
[Choy-San] निकाल्न नमिल्ने रकम म के को लागि प्रयोग गर्न सक्छु?
यो VISA कार्डहरू (भर्चुअल कार्ड / वास्तविक कार्डहरू) र QR कोड भुक्तानी तथा किनमेलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
[Choy-San] निकासी योग्य रकम र निकासी अयोग्य रकम भनेको के हो?
चार्ज गर्ने माध्यमहरूमा निर्भर गर्दै, Choy-San मा भएको बाकी रकम फिर्ता लिन सकिने र लिन नसकिने दुवै हुन सक्छ।
[A] चार्ज विधि जुन निकासी योग्य ब्यालेन्स प्रतिबिम्बित गर्दछ:सेभेन बैंक एटीएम चार्ज, बैंक स्थानान्तरण शुल्क
[B] चार्ज विधि जुन निकासी अयोग्य ब्यालेन्समा प्रतिबिम्बित हुन्छ ... क्रेडिट कार्ड चार्ज
■ उपलब्ध सेवाहरू
[Choy-San] के म बैंक हस्तान्तरणबाट ब्यालेन्स चार्ज गर्नु सक्छु?
तपाईं कुनै पनि वित्तीय संस्था बाट स्थानान्तरण द्वारा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
Choy-San एप्लिकेसनको होम → चार्ज →बैंक स्थानान्तरण चार्ज चयन गर्नुहोस्
ग्राहकसँग जोडिएको खाता जानकारी प्रदर्शित हुन्छ। कृपया वित्तीय संस्थाबाट स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
* एक अलग वित्तीय संस्था शुल्क लगाउन सकिन्छ।
* यदि स्थानान्तरण स्रोतको खाता नाम फरक छ भने, चार्जिंग प्रदर्शन गर्न सकिदैन।
यदि तपाईंले चार्ज गर्नु सक्नु भएन भने, कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
[Choy-San] के यो सेभेन बैंक एटीएमबाट चार्ज गर्न सम्भव छ?
तपाईं सेभेन बैंक एटीएम प्रयोग गरी चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पटकमा १,००० येनदेखि ३००० एनको दायरा भित्र चार्ज सम्भव छ।
[Choy-San] के यो क्रेडिट कार्डबाट चार्ज गर्न सम्भव छ?
तपाइँ APLUS कम्पनि लिमिटेड द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड दर्ता गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
Choy-San एप्लिकेसन होम → चार्ज→ क्रेडिट कार्ड चार्ज चयन गर्नुहोस।
・ कृपया "क्रेडिट कार्ड थप्नुहोस्" बाट दर्ता गर्नुहोस्।
* एक पटक चार्ज गर्नको लागि १,००० येनदेखि २०,००० येनको शुल्क सम्भव छ, र पहिचान प्रमाणिकरण पछि १,००० येनदेखि ,५०,००० येन सम्भव छ।
* क्रेडिट कार्डलाई 3D सुरक्षित प्रमाणीकरण दर्ता आवश्यक छ।
[Choy-San] चार्ज गर्ने विधिहरू के हुन्?
तपाईं तल चार्ज गर्ने विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
■ क्रेडिट कार्ड चार्ज
■ सेभेन बैंक एटीएमबाट चार्ज
■ बैंक स्थानान्तरण शुल्क
[Choy-San] के म मेरो घर बाहेक अरू कुनै ठाउँमा वास्तविक कार्ड पठाउन सक्छु?
केवल तपाईंको दर्ता गरिएको घर ठेगानामा डेलिभर गर्न सकिन्छ।
[Choy-San] तपाइँसँग ETC कार्ड र परिवार कार्ड छ?
हामी संग कुनै ETC कार्ड वा परिवार कार्ड उपलब्ध छैन।
[Choy-San] के धेरै मात्रामा वास्तविक कार्डहरू जारी गर्न सम्भव छ?
केवल एक प्रति जारी गरिनेछ।
[Choy-San] वास्तविक कार्डको अगाडी साइडमा कुनै नाम छैन।
कार्डको अनुहारमा नाम BANKIT MEMBER हुनेछ र तपाईंको नाम छापिने छैन। कृपया पछाडि हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुहोस्।
[Choy-San] के म JCB वा MASTER ब्रान्ड रोज्न सक्छु?
VISA मात्र रोज्न मिल्छ।
[Choy-San] कृपया वास्तविक कार्ड कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ बताउनुहोस ।
हामीलाई फर्वार्डिंग आवश्यक छैन र साधारण रेजिष्टर्ड मेलद्वारा डेलिभर हुनेछ।
[Choy-San] अनलाइन किनमेल कार्ड नामको लागि के प्रविष्ट गर्न सकिन्छ ?
कृपया कार्डको सतहमा छापिएको BANKIT MEMBER "प्रविष्ट गर्नुहोस्। समाप्ति मिति वर्षमा प्रदर्शित हुनेछ। "
* यदि "04/20" लेखिएको छ भने यो अप्रिल २०२० सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।
[Choy-San] प्रयोग गर्ने क्रममा, यदि कार्डको नाम BANKIT MEMBERहो भने, म भउचरमा के प्रविष्ट गर्ने?
कृपया कार्डको पछाडि हस्ताक्षर गरिएको ग्राहकको हस्ताक्षर भर्नुहोस्।
[Choy-San] मैले वास्तविक कार्ड कहिले प्राप्त गर्ने छु?
यो आवेदन पछि १ हप्तामा पठाइनेछ। कृपया Choy-San एप्लिकेसनको मेरो पेज बाट अगाडि बढ्नुहोस् → पहिचान पुष्टिकरण।
* कार्ड पुन:जारी गर्नु परेमा (५०० +कर) सुल्क लाग्ने छ।
* कार्ड पठाउन प्राय: १ हप्ता लाग्छ।
* गोल्डन वीक र नयाँ वर्षको बिदामा यो सामान्य भन्दा बढी समय लिन सक्दछ।
[Choy-San] वास्तविक कार्ड के हो?
जसले आफ्नो पहिचान पहिल्यै पुष्टि गरिसकेका छन् उनीहरूले वास्तविक कार्ड जारी गर्नका लागि आवेदन दिनु पर्छ यदि तिनीहरूले वास्तविक स्टोरमा प्रयोग गर्न चाहे भने।
* वास्तविक कार्ड जारी गर्दा भर्चुअल कार्ड नम्बर प्रयोग हुनेछ।
* वास्तविक कार्ड जारी गर्नका लागि 500 येन + उपभोग करको छुट्टै शुल्क लिइनेछ।
* वास्तविक कार्डहरू ट्रान्सफर बिना सरल रेजिष्टर्ड मेलद्वारा डेलिभर हुनेछ, त्यसैले कृपया पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाईंको पंजीकृत ठेगाना सही छ।
* कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी वास्तविक कार्डको लागि आवेदन गरेपछि रद्द गर्दैनौ ।
[Choy-San] भर्चुअल कार्ड भनेको के हो?
"जब तपाइँ Choy-San एप्लिकेसनको लागि दर्ता गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई भिसा भर्चुअल कार्ड जारी गरिनेछ जुन तपाइँ तपाइँको Choy-San ब्यालेन्समा किनमेल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।"
"तपाइँ होम पेजमा" VISA कार्ड जानकारी प्रदर्शन "बाट भिसा भर्चुअल कार्ड जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। "
"・ कृपया सहि ईमेल ठेगाना वा रेजिष्टर्ड ईमेल ठेगाना पुष्टि गर्नुहोस्।
नेटवर्क वातावरण राम्रो नभएको ठाउँमा ढिलाइ हुन सक्छ, त्यसैले कृपया नेटवर्क वातावरण राम्रो भएको ठाउँमा फेरि प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं स्पाम रोक्न ईमेल प्राप्त गर्न सेट गर्नुभयो, कृपया डोमेन पदनाम (@ Choy-San.jp) हटाउनुहोस्।
Choy-San आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
おたすけチャージभनेको के हो？
Otasuke Charge एक सुबिधाजनक Charging बिधि हो जुन सपिङ्ग गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। Choy -San शेष (main Wallet) प्रयोग को लगत्तै charge गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्झौताको मितिको रुपमा(रकम फिर्ता गर्ने दिन ) कृपया तपाइले चाहनु भएको मिति तोक्नुहोस। (यद्दपी तपाई Use गर्नु भएको दिनदेखि अर्को महिनाको अन्तिम दिन सम्म फिर्ता गर्नु सक्नुहुने छ।
निर्धारित मिति भन्दा अघि पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
[चार्ज गर्ने विधि]
Choy-San app चयन गर्नुहोस् home→charge→Otasuke Charge बाट Charge गर्नुहोस।
कृपया चार्ज रकम चयन गर्नुहोस् र चार्ज बटन थिच्नुहोस्।
कृपया सम्झौताको मिति तोक्नुहोस् र ok बटन थिच्नुहोस्।
प्रयोग गर्नुको लागि पहिचान प्रमाणीकरणको अवाश्येकता पर्दछ।
18 बर्ष भन्दा कम उमेरकाले यो सेवा प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
(३ मान येन चार्ज)तपाइले प्रयोग गर्नु भएको स्थिति हेरेर प्रयोग गर्न सकिने छ।
प्रयोगको लागि छुट्टै शुल्क छ।
Otasuke Chargeबाट गरिएको चार्ज को रकम फिर्ता लिन सकिदैन।Choy-San App को साथीहरु बिचमा ट्रान्सफर र Seven bank ATM बाट पनि रकम निकाल्न सकिदैन।
[Choy-San] के बैंक खातामा Choy-San ब्यालेन्सबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सम्भव छ?
तपाइँ Choy-San मा साथीहरू बीच पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ।तपाईं बैंक खाता वा कुनै अन्य खातामा पैसा पठाउन सक्नुहुन्न।
[Choy-San] म मित्र सूचीबाट रेमिट्यान्स पार्टनर मेटाउन चाहान्छु।
Choy-San अनुप्रयोग पठाउनुहोस् रेमिट्यान्स प्राप्तकर्ता छान्नुहोस् → तपाईं यसलाई आफ्नो साथीहरूको सूचीबाट हटाउन सक्नुहुनेछ।
* तपाइले मेटाएको Choy-San मित्र पक्षको मित्र सूचीबाट पनि हटाइनेछ।
[Choy-San] प्रतीक छविहरू मित्र सूचीमा देखिदैन ।
Choy-San एप्लिकेसन सेट गरिएको आईकन छवि मेरो पृष्ठ → ​​व्यक्तिगत जानकारी → खाता सेटिंग्स मित्र सूचीमा देखिदैन ।
[Choy-San] म रेमिट्यान्स गन्तव्य specify गर्न सक्दिन।
रेमिट्यान्स गन्तव्य Choy-San मित्रले Choy-San छोडेको हुन सक्छत्यहाँ छ। कृपया हस्तान्तरण प्राप्तकर्तासँग आफै जाँच गर्नुहोस्।
[Choy-San] के लेनदेनको रद्द (फिर्ती) नतिजाको बारेमा सूचित गरिनेछ?
लेनदेन सम्पन्न भएपछि हामी तपाईंलाई इ-मेल मार्फत सूचित गर्नेछौं।
* यदि तपाई ईमेलहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले mail delivery Setting खोल्नु पर्छ। कृपया Choy-San अनुप्रयोग होम → मेरो पृष्ठ → ​​ईमेल डिलिभरी सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस्।
[Choy-San] के म Visa Card को साथ किनमेल गर्दा भुक्तानीको संख्या छान्न सक्छु?
"भुक्तानी एक पटक मात्र गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँलाई भिसा स्टोरमा भुक्तानी संख्याको लागि सोधिन्छ भने, कृपया" भुक्तानी एक पटक "अनुरोध गर्नुहोस्।
[Choy-San] जापानभित्र अनलाइन किनमेलका लागि प्रयोग गर्न सकिदैन।
यो केहि सदस्य स्टोरहरूमा उपलब्ध नहुन सक्छ।
■ स्टोरहरू जुन प्रयोग गर्न सकिदैन
मासिक शुल्क र नवीकरणको लागि उपयोग शुल्क
उदाहरण) उपयोगिता शुल्क (बिजुली, ग्यास, पानी) / टेलिफोन शुल्क / सञ्चार शुल्क (इन्टरनेट प्रदायक प्रयोग शुल्क, उपग्रह प्रसारण र CATV अवलोकन शुल्क) / समाचार पत्र सदस्यता शुल्क (इलेक्ट्रोनिक संस्करण सहित) / बीमा शुल्क / दूरी शिक्षा पाठ्यक्रम शुल्क / अन्य मासिक सदस्यता शुल्क
・ राजमार्ग टोल (प्रबन्धित बुथ)
इन-उडान बिक्री, बोर्डमा बिक्री
होटल र कार भाडामा जम्मा (ग्यारेन्टी भुक्तानी) को उद्देश्यको लागि प्रयोग (होटल र कार भाडा शुल्कको भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ)
विभिन्न प्रीपेड कार्डहरू, इलेक्ट्रोनिक पैसा, र शुल्कहरूको भुक्तान
[Choy-San] प्रयोग रकम र फिर्ता रकम फरक छन्।
प्रयोग गरिएको शपिंग सदस्य स्टोरमा निर्भर गर्दछ (भिसा सदस्य स्टोर), प्रयोग गरिएको रकम र फिर्ता रकम फरक हुन सक्छ।
यदि तपाईं प्रयोग गरिएको रकमबाट भिन्न रकम फिर्ता लिनुहुन्छ, र केहि दिन पछि सही रकम फिर्ता लिनुहुन्छ
यदि त्यहाँ तपाईंको मुद्रासँग सम्बन्धित विनिमय दर अस्थिरता छ
पछि बिलिङ्ग केसको उदाहरण
जब रेस्टुरेन्ट, होटेलहरू, आदिमा खर्च गरेको रकममा टिप थप्दा।
※यदि प्रयोग गरिएको रकम र फिर्ता रकम फरक छन् भने, कृपया ग्राहक डेस्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
[Choy-San] के म यसलाई मासिक लगातार भुक्तान (उपयोगिताहरू, आदि) को लागी प्रयोग गर्न सक्छु?
यो लगातार भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्न सकिदैन।
[Choy-San] रद्द गरिएको प्रयोग Choy-San शेष रकमबाट घटाइन्छ।
कृपया "Choy-San एप्लिकेसन प्रयोग विवरणहरू → ईतिहास विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि रद्द गरिएको प्रयोग" प्रीपेड "छ भने, जापानमा 45 दिनहरू प्रयोग हुन्छ(विदेश प्रयोगको लागि १० दिन) कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस् स्वचालित रूपमा रद्द हुन्छ । यदि "स्टोर नाम" प्रदर्शित गरिएको छ भने, कृपया तपाईंले फेरि प्रयोग गर्नुहुने स्टोरमा रद्द अनुरोध गर्नुहोस्। "
[Choy-San] के Choy-San ब्यालेन्स भन्दा बढि किनमेल गर्न सम्भव छ?
Choy-San ब्यालेन्स भन्दा बढी किनमेल गर्नु वा एटीएमबाट पैसा निकाले error हुनेछ। कृपया Choy-San ब्यालेन्सको दायरा भित्र प्रयोग गर्नुहोस्।
[Choy-San] म कूपन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्दिन।
कृपया तपाईंले प्रयोग गर्न चाहानु भएको कुपन चयन गर्नुहोस् र भुक्तानीको समयमा देखाउनुहोस ।
[Choy-San] म एउटा कारोबार रद्द (फिर्ता) गर्न चाहन्छु।
"लेनदेन को रद्द (फिर्ता ) को लागी, कृपया तपाईले किन्नु भएको स्टोरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।"
[Choy-San] म किनमेल गरेको भुक्तान गर्न सक्दिन।
यदि तपाईं किनमेलको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न भने
तपाईं एक Choy-San ब्यालेन्स छ भने पनि, यदि तपाईं यो कारोबार रकम (10,00,000 येन) भन्दा बढी नाघ्यो भने किनमेल गर्न सक्दैन।
[Choy-San] के QR कोडबाट भुक्तान गर्न सम्भव छ?
तपाईले हामीसँग सम्बद्ध भएका स्टोरहरूमा QR कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
[Choy-San] भिसा कार्ड कति प्रकारका छन र प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
भिसा भर्चुअल कार्डहरू र भिसा वास्तविक कार्डहरू भिसा कार्डहरूको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
"तपाइँ Choy-San अनुप्रयोग गृहमा भिसा भर्चुअल कार्ड जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ" VISA कार्ड जानकारी प्रदर्शन "। कृपया EC साइटमा प्रदर्शित कार्ड नम्बर इत्यादि प्रविष्ट गर्नुहोस्। "
भिसा वास्तविक कार्डहरू वास्तविक स्टोरहरूमा जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृपया यो नबिर्सिन सावधान हुनुहोस्, किनकि तपाईंलाई तपाईंको पिन प्रविष्ट गर्न भनिएको हुन सक्छ।
[Choy-San]रेमिट्यान्स त्रुटि देखा परेको बेलामा
यदि एक स्थानान्तरण त्रुटि देखा पर्‍यो भने, निम्न सम्भावनाहरू छन्।
यदी रेमिट्यान्स गर्ने साथी पहिलेनै सदस्यता रद्द गर्नु भएको छ भने।
यदि तपाईंले अधिकतम रेमिट्यान्स रकम भन्दा ठूलो रकम राख्नुभयो भने
जब पठाउने साथीको Choy-San रकम तोकिएको भन्दा धेरै हुन्छ भने
[Choy-San] के म रेमिट्यान्स रद्द गर्न सक्छु?
एक पटक पठाएको रेमिट्यान्स रकम रद्द गर्न सकिदैन, तपाइले रकम पठाउनु भएको साथी संग सम्पर्क गर्नुहोस।
[Choy-San] म साथीलाई दर्ता गर्न चाहन्छु।
तपाईं साथीको लागि Choy-San अप्लीकेसन होम → रेमिट्यान्सबाट → रेमिट्यान्स प्राप्तकर्ता छनौट गर्नुहोस् साथि जोड्नुहोस् बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं QR कोड देखाएर वा स्क्यान गरेर पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
[Choy-San] के म पैसा पठाउन सक्छु?
Choy-San अप्लीकेसनको साथीहरू बीच Choy-San रकम तपाईं पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले अग्रिम साथीको रूपमा दर्ता गर्नु पर्छ।
* यदि तपाईंले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुभएको छैन भने, पैसा पठाउनु सक्नु हुनेछैन (तपाईले रकम लिन चाही सक्नुहुन्छ)।
* यदि प्रापकको Choy-San शेष सीमा पार भयो भने रेमिट्यान्स सम्भव हुँदैन।
[Choy-San] जब पैसा निकाल्दा त्रुटि देखा पर्दछ
यदि पैसा निकाल्दा केहि त्रुटी भयो भने तपाइले राखेको भन्दा निकाल्नु लागेको रकम धेरै हुन सक्छ
[Choy-San] के म विदेशबाट एटीएम प्रयोग गर्न सक्छु?
विदेशी एटीएमहरू प्रयोग गर्न सकिदैन
[Choy-San] निकाल्न योग्य रकम
सेवेन बैंक एटीएमबाट निकासी सम्भव निकासी गर्न सकिन्छा।
"तपाइँ Choy-San अनुप्रयोग होम→ वालेट मेनूबाट फिर्ता निकाल्ने रकम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।"
क्रेडिट कार्डबाट चार्ज गरिएको बाकी रकम फिर्ता लिन सकिदैन।
[Choy-San] के म पैसा फिर्ता निकाल्न सक्छु?
स्मार्टफोनमा सेभेन बैंक ATM प्रयोग गर्दै तपाईं निकाल्न फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ।
* अधिकतम निकासी 500,000 येन हो।
के व्यक्तिगत प्रमाणिकरण सेवाको लागि दर्ता गर्न सम्भव छ (３D secure)?
Choy-San एक कार्ड हो जुन व्यक्तिगत प्रमाणीकरण सेवाको अधीनमा हुँदैन (3D secure)। तपाइँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्न।
के Choy-San सँग बीमा छ?
बीमा समावेश छैन।
कृपया मलाई कार्ड हराउदा वा चोरीको बारेमा बताउनुहोस्।
कृपया तुरून्त ग्राहक डेस्कसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई नजिकको पुलिस स्टेशन वा प्रहरी बक्समा पनि पुर्‍याउनु पर्छ।
■ Choy-San ग्राहक डेस्क (हराएका वा चोरी भएका कार्डहरूका लागि मात्र)
फोन गर्ने समय: २४ सै घण्टा, (वर्षको सबै दिन )
[Choy-San] रद्दको बारेमा
रद्द प्रक्रियाको लागि, कृपया निम्न प्रक्रिया गर्नुहोस्।
पहिचानको पुष्टिकरण हुनु अघि BANKIT Me(Choy-San)
रद्द प्रक्रिया पूरा गर्न कृपया ग्राहक डेस्कसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी Choy-San शेष रकम फिर्ता गर्दैनौं किनकि यो एक प्रीपेड भुक्तानी विधि हो। कृपया प्रयोग गर्नुहोस् ताकि Choy-San को शेष र आफै ० येन हुनेछ।
▼ कोष बन्दोबस्त कानूनमा आधारित "BANKIT Me（Choy-San" को लागि
■ पहिचान पछि(BANKIT You Choy-San)
रद्द प्रक्रिया पूरा गर्न कृपया ग्राहक डेस्कसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं Choy-San शेष रकम फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, तर छुट्टै शुल्क लिइनेछ।